चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण नेपालमा लागि कति फलदायी ?(भिडियो) – Tufan Media News
Wednesday December 8, 2021 |
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण नेपालमा लागि कति फलदायी ?(भिडियो)
२५ आश्विन २०७६, शनिबार ११:०४
चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङ आज नेपालको राजकीय भ्रमणमा काठमाडौँ आउँदै छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा आउन लागेका चिनफिङ आइतबारसम्म नेपालमा रहेर चीन फर्किनेछन् ।
आज शनिबार अपराह्न काठमाडौँ आइपुग्ने सी यहाँ रहँदाका करिब २० घण्टा निकै व्यस्त रहनुहुनेछ । चीनकै विशेष विमानबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेपछि उनी केही विश्रामका लागि सोल्टी होटलमा जानेछन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिनिया समकक्षी सीको सम्मानमा शनिबार नै राजकीय भोजको आयोजना गर्ने कार्यक्रम छ । त्यहाँ मुख्य नेताहरुको भेला र समान्य भेटघाट हुनसक्नेछ । आज नै राष्ट्रपति सीसँग प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ ।
राष्ट्रपति सीले आइतबार बिहानैदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत लाई भेट्ने कार्यक्रम छ । आइतबार नै राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री ओलीको समुपस्थितिमा दुईपक्षीय सम्झौता तथा समझदारीपत्रहरुमा हस्ताक्षर र संयुक्त पत्रकार सम्मेलन हुनेछ ।
रुकुममा अमेरिका हिडेका श्रीमान
छोराको मुख हेरेर मर्न
‘मैले प्रेममा कहिल्यै पनि
विदेशबाट श्रीमान घर आईपुग्दा,
यानम भाईको बुवाले अर्की
हनिमुन मनाउन जाने जोडीलाई
रुकुममा अमेरिका हिडेका श्रीमान संसार छाडेको खबर सुनेपछि श्रीमती अ’चेत अवस्थामा(भिडियो)
भारतीय सेना प्रमुख चढेको हे’लिकप्टर दु’र्घटना
मोटरसाइकल दुर्घ’टनामा एक जनाको मृ’त्यु
यो हो कुनै पीडाबिना १ मिनेटमा मान्छे मारिदिने ‘मृत्युको मेसिन’ जस्ले कानुनी स्वीकृति पायो
छोराको मुख हेरेर मर्न मन छ भन्दै धुरुधुरु रोईन ८० बर्षिय बुढी आमा (भिडियो)
‘मैले प्रेममा कहिल्यै पनि सम्मान पाइन् सबै भन्दा बढी घृ’णा उनैलाई गर्छु’- प्रिज्मा (भिडियो सहित)
विदेशबाट श्रीमान घर आईपुग्दा, श्रीमतीले टाप कसिन ! बिदेशमा बसेर नै श्रीमती उडाइदियो (भिडियो)
यानम भाईको बुवाले अर्की श्रीमती लिएर भा’गे, प्रेमिकाले पनि दिईन् धो’का ! यानम भाईको घर पुग्दा हेर्नुस्(भिडियो)
हनिमुन मनाउन जाने जोडीलाई बुद्ध एयरले भाडा नलिने
गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच कु’टाकु’ट, अध्यक्षकाे दुईवटा दाँत भाँचियाे